Is Addoonsiga Siyaasadda: | Saxil News Network
Is Addoonsiga Siyaasadda:
October 20, 2018 - Written by admin
Marka laga taggo arrimaha si shakhsi ah u dhex maray Madaxweyne Muuse Biixi iyo
Prof Cabdi Cali, maqaaladii profku waxay gudbinayeen laba aragtiyood oo aan ula kala magac baxay ” Is-addoonsiga Siyaasadda & Maskax Ku Qufulnaanta Qabiilka ” profku waxay doodiisu daarnayd in aanu la shaqayn karayn cid walba oo aaminsan habdhaqankaas. Maqaalka Qoraa Cali Coomay isna wuxuu ka hadlaayey aragtida hore ee aan u la baxay ” Is addoonsiga siyaasadda “, Cali wuxuu sheegay in la samro oo la dulqaato. Profku laftiisu jawaabtiisa wuxuu ku qiray in la samro oo la dulqaato laakiin waxay ku kale taggeen shayga, wacyiga iyo qofka loo dul-qaadanaaya kuu yahay ? Prof Cabdi shuruud buu ku xidhay, Qoraa Coomay se kuma xidhin.
• Is Addoonsiga Siyaasadda:
Madaxweynahu wuxuu Madaxweyne ku yahay sharci, intuu sharcigaas ku shaqaynaayo ayuun buu Madaxweyne yahay. masuulka kasta oo ka hooseeyana sharci ayuu ku magacaaban yahay, Madaxweynaha waxaa awood loo siiyey innuu cid booskaa u qalanta ka soo xulo ummadda, hadda ma aha mid isaga si shakhsi ah u raaligalinaaya; innuu hawshaa qaran ka soo bixi karaayo, ayey shuruudo tahay.
Wadda shaqayntoodu waa mid sharci iyo habraac leh, ma aha innuu Madaxweyne wax walba oo niyaddiisa ku soo dhaco ku amro dadka la shaqaynaaya siddii ay ugu shaqeeyaan bakhaar uu gaar u leeyahay. Gabadha xafiiska u xaadha iyo madaxweynahu ba, waa laba shaqaale oo ummadda u shaqeeya, mid ba shaqo ayeynu u dirsanay, innagaa mushaharka siina, isuma shaqeeyaan, mushahar na isma siiyaan, labaduba ummadda ayey u addeeggaan, laakiin wey kala sareeyaan oo hishiiska bulashadeena ( dastuurka ) ayaa kala saraysiiyey.
Siyaasadda madaxweynaha ee ay kula shaqaynayso xukumaddiisu, waa in ay ku qotantaa barnaamijkii xisbigooda, ma aha innuu Madaxweynaha aragti cusub jeebka dambe kala soo baxo. Saaxiib, yeyna ku hoos marin; innagu kaliya laba qof oo iska luggaynaaya maynaan dooran ee waxaynu dooranay xisbi iyo buuggii wax-qabadkiisa, wixii buugga ka qornaa ee ay balan-qaadeen fulintiisa ayeynu ku dooraney labada musharax ( xasuuso waraaqadii cod-bixinta doorashada waxaa ku yaallay astaanta seddaxda xisbi ee kumuu oollin magac ama sawir qof gaar ah ) haddii Madaxweynahu ku shaqayn waayo aragtidii xisbigiisa ee isaga lagu doortay waa khiyaamo sidoo kale na wuu ka baxay xayndaabkii xisbiga mar haddii uu ka hor yimi aragtidii xisbiga lagu doortay.
Aan biyo dhacee, nuxurka dooda Coomay waxay ahyd: in loo shaqaynaayo qof gooniya sidda Madaxweyne X oo kale, in isaga la raali galiyo, loo samro xataa hadduu shaah kugu daadiyo, loo ciyaaro, wax walba na laga yeello ( yes man ). Coomay wuxuu aaminsanyahay in habkaas ku dhisan raali galinta ashkhaastu iyo is gamaarinta marka shaah lagagu daadiyo in darajo lagu gaadho. Laakiin prof CC wuxuu aaminsan yahay in loo samro, loo tabco oo loo dhinto aragti aad aaminsan tahay. Coomay wuxuu aragtidiisa ku soo kooban in xil sare uun la gaadho bi’ayi shuruud laakiin Prof ku, xil qabashada wuxuu ka horaysiiyey aragtida lagu shaqaynaayo nooca ay tahay.
Tusaale ahaan haddii hammiga ugu sareeya ee Cabdi iyo Coomay uu yahay; in maamule looga dhigo goob lagu cibaadaysto, Coomay ma kala jecel in goobtaasi tahay tu ay ku cibaadaystaan dad islaami ah, Hindus ah, Christian ah ama Buudis ah. Isagu kaliya wuxuu rabaa in maamule uun looga dhigo goob lagu cibaadaysto laakiin Cabdi wuxuu rabaa in kaliya maamule looga dhigo goob ay ku cibaadaystaan dad ay isku diin yahiin. Kuwaa ay isku Diinta yahiin dhibaato walba oo ka timaada wuu u samrayaa una dul-qaadanayaa haddii ay kala Diin yahiin farahuu ka qaadayaa, waayo profka caashaqiisa maamule jacaylka ah, shuruud baa ku xidhnayd.
Maqaalka Coomay oo ay cadho badani ka muuqatay waxay dadka badankiisu u fahmaan inay baroortu Orgiga ka weyn tahay, oo uu Coomay adeerkii prof Cabdi Cali ku canaanaayo, adeer maxaad u mari wayday daraqii uu tolkeen maray oo aad Madaxweynaha ugu hor imanaysaa. Miyaad iska aamustid ama taageertid, oo u difaacdid sida Maxamed Xaashi, Boobe Y Ducaale, Cali Guray, Yuusuf C Gaboobe iyo siyaasinta kale ee beesha oo dhammaantood isku xil qaamay difaaca Madaxweynahiina Biixi.
W/Q Xasan C/qaadir Yuusuf ( Hassan Garnayl
DAAWO:-Somaliland Oo Sheegtay in Ay Xiniinyo Ku Joogto Goboladda Sool Iyo Sanaag+Fariina Puntland U Dirtay
Dumarka Xildhibaanada Ah Ee Dalka Kenya Oo Golaha Baarlamaanka Ka Dareeray + Sababta.
Af Hayeenka Trump Sarah Sanders Oo Is Casishay
War Deg Deg Ah: Khasaaraha Ka Dhashay Doon Urarnayd Ganacsato Somaliland Ah Oo Degtay.
Xildhibaan Dhakool Oo Dalbaday Raali Gelin Uu Siiyo Shacabka Somaliland Iyo Mawqifka Uu Ka Taagan Yahay Xukuumada